Loza an-dranomamy :: Vehivavy bevohoka maty niaraka tamin’ny vady aman-janany • AoRaha
Loza an-dranomamy Vehivavy bevohoka maty niaraka tamin’ny vady aman-janany
Niharam-boina ny olona telo mianaka, nahitana lehilahy sy ny vadiny, izay mitondra vohoka ary ny zanak’izy ireo iray. Rendrika ny lakana nitondra azy ireo tany Manompana, distrikan’i Soanierana Ivongo, tamin’ny alatsinainy 18 mey lasa teo. Lasan’ny rano izy telo mianaka. Hita teo amorondrano ny vatana mangatsiakan’izy ireo, taorian’izay.
Nandeha tamin’irony lakana kely irony ny mpivady sy ny zanak’izy ireo lahy, 12 taona, avy tany Tanambao, kaominina Manompana, distrikan’i Soanierana Ivongo. Izy telo mianaka sy ny mpivoy no teny ambony lakana. Mitondra vohoka dimy volana ity renimpianakaviana.
« Namakivaky ranomamy ny lakana ary namonjy tamin’ ny ranomasina avy eo. Teo no nitrangan’ny loza, tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. Afaka nanavotra aina ny mpitondra lakana. Nentin’ny rano kosa ireo mpandeha telo », araka ny fampitam-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana any an-toerana.
Tsy nisy andro ratsy, tamin’io fotoana nisehoan’ny loza io. Heverina ho noho ny hamafin’ny ranomasina nandalovan’ny lakana no nahatonga ny loza. Mampiahiahy ihany koa, hoy ny mpanao famotorana, ny fomba fizotran’ilay lehilahy, mpivoy ny lakana.
Niantso vonjy tamin’ny tanàna teo amin’ny manodidina itsy mpitondra lakana nieren-doza. Niroso tamin’ ny fikarohana azy telo mianaka ny fokonolona. Hita teo amin’ny sisin’ny ranomasina, tsy lavitra ny toerana nisehoan’ny loza, ny vatana mangatsiakan’izy ireo, ora vitsivitsy taorian’izay. Natao fizahana sy nokarakaraina ny razana, mialoha ny nanolorana azy tamin’ny fianakaviany.
Fiompiana biby voarara :: Sokatra an-jatony tra-tehaka tao an-tranona Karàna
Fanafihana moto :: Najifan’ny jiolahy ny vola dimy tapitrisa ariary